तपाइँको साइट गडबड नगरी WordPress लाई २.०2.05 मा स्तरवृद्धि गर्नुहोस्! | Martech Zone
शनिबार, अक्टोबर 28, 2006 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
मलाई WordPress मनपर्दछ र मेरो सबै ग्राहकहरूको लागि सिफारिस गर्दछु। आज, सबैभन्दा नयाँ संस्करण जारी भयो। तपाईं फिक्सहरूको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ र अपग्रेड डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यहाँ अपग्रेड गर्ने बारे केहि सुझावहरू छन्:
NOTE: WordPress मा कोर कोड 'ह्याकि' 'बाट बच्न कोसिस गर्नुहोस्, यसले अपग्रेड गर्न धेरै सजिलो बनाउँदछ। मसँग केहि 'ह्याकहरू' छन् तर म ती कागजातहरू राख्छु ताकि जब म भर्खरको संस्करण डाउनलोड गर्दछु, मँ मेरा सम्पादनहरू गर्न सक्छु र अगाडि बढ्न सक्छु। तपाईको बाहिरी कुनै पनि फोल्डरमा कुनै पनि प्रकारको कस्टम फाइल वा फोल्डरहरू राख्नबाट बच्नुहोस् WP-सामग्री फोल्डर।
जब सम्म तपाईं WordPress ह्याक गर्नुभएको छैन, अपग्रेड प्रक्रिया एकदम सिधा अगाडि छ (छविहरू यसका हुन् आतंकको प्रसारण .3.5.5..XNUMX.)
१. तपाईको FTP ग्राहक खोल्नुहोस्, WordPress फाईल अपग्रेडबाट सबै फाईलहरू छान्नुहोस् तर EXCLUDE गर्नुहोस् WP-सामग्री फोल्डर। अवस्थित फोल्डर र फाइलहरूमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
२. अब खोल्नुहोस् WP-सामग्री तपाईंको स्रोत र गन्तव्य फोल्डरमा फोल्डर। Index.php फाईलमा कपि गर्नुहोस्।
Last अन्तमा, को माध्यम बाट रमज WP-सामग्री तपाइँको स्रोत र गन्तव्य फोल्डर मा subfolders। विषयवस्तुहरू र प्लगइनहरूमा आवश्यक रूपमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्, तपाईंले थप गर्नुभएको र परिमार्जन गर्नुभएको कुनै पनि प्लगइनहरू र विषयवस्तुहरू मेटाउन अस्वीकार गर्नुहोस्।
Your. तपाईको अर्को चरण तपाईको प्रशासकीय ईन्टरफेसमा लगइन गर्नका लागि मात्र हो।wp-admin)। तपाइँलाई तपाइँको डेटाबेस अपग्रेड गर्न प्रोम्प्ट गरिने छ। एक बटन क्लिक गर्नुहोस् र तपाइँ सक्नुभयो!
त्यहाँ तपाईंसँग यो छ, तपाईं स्तरवृद्धि गर्नुभयो। आशा छ यसले तपाईलाई मद्दत गर्दछ!
Apple-Shift-3 र स्क्रिनसट मेरो डेस्कटपमा बचत गरिएको छ। कुनै 'प्रिन्ट-स्क्रिन' वा 'अल्ट-प्रिन्ट-स्क्रिन' छैन, इलस्ट्रेटर खोल्नुहोस्, टाँस्नुहोस्, क्रप गर्नुहोस्, वेबको लागि बचत गर्नुहोस्, आकार बदल्नुहोस्, छवि प्रकार सेट गर्नुहोस्, बचत गर्नुहोस्।
🙂 यो एकदम सजिलो छ!
अक्टोबर 30, 2006 बिहान 7:44 बजे
मैले भर्खरै मेरो पुरानो सेतो iBook G3 फिक्स गरेको छु। यसले टाइगरलाई राम्रोसँग चलाउँछ र यसलाई अलग गरेर फेरि एकसाथ राख्नु ifixit.com को उपयोगी गाइडहरूको लागि धन्यवाद थियो। तपाइँ पीसी संग यो भन्न सक्षम हुनुहुने छैन जब सम्म तपाइँ तिनीहरूलाई अलग गर्न मा एक विशेषज्ञ हुनुहुन्न; म, मैले यस्तो पहिले कहिल्यै गरेको छैन।
जब पीसी अन्ततः मर्छ, हाम्रो परिवार कम्तिमा, म्याक मिनीमा स्विच गर्न जाँदैछ। मलाई Vista चलिरहेको कुनै पनि कम्प्युटरको नजिक जान कुनै चासो छैन।
तपाईं OS को बारेमा सही हुनुहुन्छ। GUI अद्भुत र सहज छ।
भर्खरै अद्यावधिक पूरा भयो, कुनै पनि समस्याहरूसँग काम गर्यो। धन्यवाद!